Alakamisy 20 Jiona 2019. – FJKM
Asan’ny Apostoly 20.1-16
Inona no hataonao rehefa miatrika fanenjehana?
1-Aza maika ny handositra raha tsy milamina ny tanàna
Vokatry ny Filazantsara notorin’i Paoly dia nisy olona voatohitohina ny tombotsoany (Asa 19). Nitarika tabataba tao an-tanàna izy ireo . Niandry izany hilamina tsara i Paoly vao niala teo an-tanàna . Indraindray isika rehefa mitory amin’ny tanàna iray , ka misy olana dia mitsoaka avy hatrany. Tsy mety izany.
2-Sahia manapa-kevitra tampoka
Efa hiondrana handeha any Syria i Paoly no mahafantatra fa misy olona mioko hamono azy . Tsy nisalasala izy nandray fanapahankevitra rehefa misy ny zavatra tampoka toy izany , ka miandry hoe: efa mitranga ny loza vao hanapa-kevitra . Izany indrindra koa anefa no tena mahatonga antsika hiankina mandrakariva amin’ny Tompo .
3-Mahaiza mandamina miaraka amin’ny mpiara-miasa
Nahay niara-niasa sy niara-nandeha tamin’ny olona samihafa fiaviana i Paoly (and4-16). Mifampiandry (and 5-6) , na dia misy aza ny fandaminana ataon’i Paoly , dia azo atao tsara ny manova izany arakaraka ny zava-misy (and13-14). Fehiny , tsy misy ady mihitsy eny an-dàlana.
4-Aza adinoina ny tena fototrasa
Nanao teny fampaherezana i Paoly vao niala tao Efesosy (and 1) . Nitoriteny imbetsaka nampahery ny mpino izy va niala tao Makedonia (and2). Nampianatra mandra-paharainan’ny andro sy namelona an’i Eotika izy tao Troasy vao nandeha , na dia maika aza (and 7-11).